सुडानमा मान्छेले मान्छे खान्छ रे हो ? :: Press Chautari ::
सुडानमा मान्छेले मान्छे खान्छ रे हो ?
एई ! सुडानमा मान्छेले मान्छे खान्छ रे हो ?
करिब चार महिनाको सुडान बसाईपछि छुट्टिमा नेपाल आएको बेला काठमाडौंमा कसैले सोधेको थियो मलाई । सुनेर हाँसो उठ्यो । हाँसिन तर ठाडो जवाफ दिएँ ‘खै था छैन ।’ त्यो मान्छेको जिज्ञासाले मलाई अन्लाईन एउटा समाचार स्मरण गरायो । ‘सुडानको डार्फरमा रहेको नेपाल प्रहरीको फर्मपुलिस युनिटसँग एपिसी गाडि नभएको कारण संयुक्त राष्ट्रसंघले नन्फङ्सनल घोसित गरेको कारणले दक्षिण सुडानमा हुन गईरहेको जनमत सङग्रहको सुरक्षामा नखटाएको हो नेपाल प्रहरीलाई ।’ म हाँसेको थिएँ समाचार पढेर । सुडानमा दुईवटा मिसन अहिले पनि छन् । एउटा डार्फरमा ‘युनामिड’ र अर्को ‘अनमिस ।’ ‘अनमीस’ले जनमत सङग्रह हेर्ने काम गरेको होे । ‘अनमिस’मा पनि नेपाल प्रहरीका धेरै सदस्यहरु केही वर्ष अघिदेखिनै कार्यरत छन् । जति सुकै पोख्त र सशक्त भए पनि सामान्यतया एउटा मिसनको कार्यक्षेत्रमा अर्को जान सक्दैन । आफ्नै एरियाका पीसकिपरहरु कुनै कारणले घाईते भए भने उपचारका लागि उडान भर्नुपर्दा सुडान सरकारको अनुमति चाहिन्छ । समयमा अनुमति नपाएर पिसकिपरहरुको अकालमा मृत्यू भएको उदाहरणहरु छन् डार्फरमा । डार्फरका नेपाल प्रहरी दक्षिण सुडानमा जान पाएनन् भन्ने समाचारले हसाँउनु स्वाभाविक थियो । आफन्त र साथीभाइलाई फोन र ईमेलबाट जवाफ दिँदादिँदा थाकेको थिएँ, समाचारमा आए जस्तो कुरो होईन भनेर ।
मान्छेले मान्छे खाने कुरा पनि त्यही समाचारकै जस्तो स्रोत त होला भन्ने लाग्यो । त्यसैले कुनै कुरा गर्न चाहिन त्यो सवालमा । समाचारको कुरा केही समय रह्यो बिर्सियो । तर साथिको प्रश्नले भने मलाई कहिलेकहीँ झस्काई रहन्थ्यो । मान्छेले मान्छे कसरी खान्छ ? कसले भन्यो यस्तो कुरा उसलाई ? काला भएपनि गोरा भए पनि मान्छे भनेको मान्छे हो । हामी गाईलाई पुजा गर्नेमान्छे जताततै गाई काटेर मासु खाएको देख्दा मन रुन्थ्यो । द्वन्द्वमा मान्छे मारिनु स्वाभाविकै होला तर मासु खानकैलागि मान्छेले मान्छे मार्छ त ? मान्छेले मान्छेको मासु खानु भनेको आफ्नै आमा, दिदी, दाजुभाइ, बाबु वा सन्तान मध्ये कसैलाई खानु होईन र ? यस्ता झुटा प्रचार गर्ने मान्छे प्रति रिस पनि उठ्योे । हामीसँग भेट्दा हाँस्छन् बोल्छन्,पानी दिन्छन्,हात मिलाउँछन् । उनीहरु खुसीमा हाँसेको देखेको छु । दःुख पर्दा रोएको देखेको छु । हामै्रझैं कुर्ची,साबुन,तालीम,किताब,मुस्किला,नीम ,सुरुवाल...आदि जस्ता धेरै साझा शब्द बोल्छन् ती पनि । मानवीय समवेदनामा के फरक छ ती र अरुमा ? काला छन् तर रगत त रातै छ । कसरी मान्छेको मासु खालान् ?
सुडान दुइटा भैसकेको थिएन त्यसबेला । एकदिन त्यही फोटोको प्रसङ्ग कोट्याएँ मैंले । सँगै कार्यरत ईन्स्पेक्टर दिलिप झाले भन्नुभयो भाइ ‘द्वन्द्वको बेलाको फोटो हे¥यो भने मान्छेले मान्छे खाने अवस्था आएको थियो कि क्याहो जस्तो लाग्छ यहाँ ।’
हुन पनि चारलाख भन्दा बढी मारिएका थिए । बीसलाख भन्दाबढी त देस भित्रै बिस्थापित भएर प्लाष्टीक र घसेटाले बारेका झुप्रामा बस्छन् युएनल्े दिएको दुईछाकको भरमा । बिस्थापित भएर छिमेकी देसतिर जानेहरुको त कथा अलग छ ।
‘कस्ता फोटाहरु हुन त्यस्ता ?’ स्वाभाविक जिज्ञासा थियो मेरो ।
आफुले अफिसको कम्प्युटरमा हेरेका धेरै फोटाहरुका बारेमा बेलिबिस्तार लगाउनु भयो । कतिपय फोटाका वर्णनले मलाई खासै असर गरेन । त्यस्ता कयौं फोटाहरु त नेपालको द्धन्द्धले देखाईसकेको थियो । तर उहाँले एउटा यस्तो फोटोको बारेमा सुनाउनुभयो कि मेरो आङ सिरिङ्ग भयो । मेरी आमा,मेरो परिवार,मेरो गाउँसमाज र सिङ्गै देस दुख्नथाल्यो । सबै भन्दा बढी त मेरो दुईवर्षको छोरो दुखिरह्यो । पसुपतिनाथलाई सम्झेर प्रार्थना गरिरहेँ ‘हे भगवान ! नेपालमा कहिल्यै यस्ता फोटाहरु नखिचिउन् ।’
डर मात्र लागेन । द्धिविधा भयो त्यो फोटो हेरौं कि नहेरौं भनेर । तै पनि चाहारें अफिसका कम्प्युटरहरु । भेटिन । कसैले फोल्डरै डिलिट गरेछ क्यार । त्यसपछि हामी धेरैले प्रयत्न ग¥यौं । रिसाईकलमै खोज्यौं, भेटिएन । ‘माईक्रोसफ्ट इन्कार्टा’ मार्फत सर्च ग¥यौं, अहँ फेला परेन । ठिकै भो भन्ने पनि लाग्यो मेरो आतङ्कित मनलाई । तर जिज्ञासु मन मानिरहेको थिएन ।
एकदिन विस्थापित सुडानीको गाउँतिर गएर फर्कदा एक नाईजेरियन पुलिस सार्जेन्ट इसरायल पेरेटेले पनि त्यो फोटोको बारेमा सुनायो । हाम्रो भाषा सहयोगी एक सुडानीले खण्डन् ग¥यो ‘त्यस्तो अवस्था थिएन सुडानमा,कसैले हल्ला ग¥यो होला ।’ भनेर ।
मेरै आँखाले हेरेको फोटोहो त्यो । यति ठूलो तिम्रो देसको कुरा जानकारी राखेनौ भने कसरी थाहा पाउँछौ कहाँ के भएको थियो भनेर । उता दक्षिणतिरको पनि त हुनसक्छ’ नाईजेरियनले बलियो तर्क पेश गरेको थियो ।
त्यहीबेला एकदिने वर्कसपमा सहभागी हुन युनामिडको दक्षिणी सेक्टर हेडक्वाटर न्याला गएँ । नेपाल प्रहरीको एकसय चालीस जनाको सुरक्षा दस्ता ‘फर्म पुलिस युनिट’को एकरातको पाहुना हुन पुगें म त्यहाँ । कम्प्युटरमा काम गर्ने पुलिस हेडक्वाटर काठमाडौंमा सँगै काम गरेकी कल्पना अधिकारी र उहाँकी सहयोगी संगीता थिए । उनीहरुको अफिसमा छिर्नासाथ कम्प्युटरको स्क्रीनमै परे आँखा । फोटै हेर्दै थिए । कस्तो संयोग, त्यहाँ पनि फोटोकै आतङ्क ? कतै गिँड, कतै टाउका थिए मान्छेका । म पनि अघि सरें हेर्नलाई ।
आफू बसेको कुर्सी मलाई छाडेर पर्तिर सरिन् कल्पना दिदी । संगीता अर्कै कम्प्युटरमा थिइन् । मेरो दिमागकोे त्यही पुरानो फोटो खोज्न थालें म । अहँ भेटिन । संगीताको कम्प्युटरतिर लम्कें । दसवर्ष नेपालमा हेरे जस्तै थिए धेरै फोटाहरु । खासै नौलो भएन मेरा लागि । अझ सियरालियन,रुवान्डा,नाईजेरिया लगायत धेरै देसको द्वन्द्वका वृत्तचित्रहरुमा जेनोसाइड सम्म हेरिसकेको थिएँ । एउटा बलिष्ठ हतियारधारी पुरुषले महिलाका तिघ्रामा लात हानिरहेको, महिलाले इज्जत ढाक्न कपडा सम्हालन समेत नपाएको, उसको लोग्नेलाई पर्तिर अर्कैले बन्दुकको कुन्जाले हानिरहेको, सानो बालकलाई नाङ्गै बनाएर घोप्टो पारी बुटले ढाडमा टेक्दै हातखुट्टा मर्काएर सिन्को भाचेजस्तै भाँचेको दृष्य हेरे पछि कति सम्म अन्धो,निष्ठुर र बैह्रो हुनसक्छ हतियारको दम्भ भन्ने कुरा थाहा पाएको थिएँ । त्यसैले संगीताले देखाएको फोटोले खासै दुखाएन । फेरि मैंले हेर्न खोजेको फोटो पनि त अर्कै हो ।
‘ल यो होला तपाईले खोजेको फोटो ।’ संगीताले केन्द्रित गरेको फोटो हेरेँ, किशोर,युवा र बूढाहरुको एउटा हतियारधारी समूह । घाँटीदेखि खुट्टैसम्म ढाक्ने सेता लुगा लगाएका, टाउकामा सेतो फेटा बाँधेका पाकाहरु, विभिन्न रङ्गका सर्टपाइन्ट लगाएका तन्नेरीहरु । सबैका हातमा ‘एके फोर्टिसेभेन’ राईफल । फोटो खिच्नकै लागि कोही लहरै उभिएका कोही अगाडि टुक्रुक्क बसेका । तिनीहरुको अगाडि भुईंभरी मिलाएर राखिएका काटिएका मान्छेका टाउकाहरु जिउँदा मान्छेलेझैं आँखा हेरिरहेका थिए मैतिर ।
फोटोको साईडमा बसेको एउटा तन्नेरीले कुहिनोमा गिंडिएको मान्छेको सिङ्गै हात गिंडिएकै पट्टिबाटै आफ्नो मुखमा हालेर उखु जस्तो चुसिरहेको थियो । गिंडिएको हातको बाँकी शरीर नजिकै भुईंमा लडेको थियो । हरे शिव ! केहो यो ? आँखा चिम्लें निकैबेर । आँखा खोल्दा त्यही फोटो थियो । दिङ्गदिङ्ग लागेर आयो, थुकथुकी लाग्यो,तिरिमिरी भयो आँखा । कुन उद्दे्श्यले त्यसरी मान्छे गिंडेर उत्सब मनाएका होलान् ? अनुहारमा न कुनै सङ्कोच छ न पश्चाताप । ओलम्पिक खेल जितेका खेलाडिले राष्ट्रिय झण्डा हातमा लिएर गर्वसाथ फोटो खिचे जस्तो । धन्य मेरो देश ! मेरो देशको द्वन्द्व र मेरा देशका पार्टीका नेताहरु ! समयमै रोकेछौ द्वन्द्वलाई । नराम्रो गरेर पनि रामै्र गरेछौ । धन्य छौ, धन्य रहिरहु मनमै बोलें ।
टाउको दुख्यो । म उठें । ‘अरु पनि छन् हेर्नु न । हामीले कतिचोटी हेरिसकेको फोटो तपाईं एकचोटी पनि हेर्न नसक्ने ?’ संगीताले आफूलाई साहसी प्रमाणित गर्दैथिईन । ‘पेनड्राईभमा नहाल्ने ?’ फेरि भनीन् ।
‘त्यस्तो फोटो अरु कसैलाई देखाएर तनाब दिनु छैन । मैंले हेर्न खाजेको फोटो पनि होईन यो ।’ मैंले भनें
‘हामीसँग भएको त यतिहो माधव सरसँग छ भने भरे हेरौंला ।’ ‘भो नहेर्ने ।’ मैंले चासो गरिन ।
‘अहिलेसम्म त्यही फोटो हेर्न खोजिरा अब चाहीँ किन नहेर्ने ?’ संगीताले यसो भन्नु स्वाभाविक थियो ।
‘तिमी हामी साना छोराछोरीका आमाबाबूले हेर्न सकिन्न ।’ मैंले टार्न खोजें । तर उनीहरु पटक्कै मानेनन् ।
दुई जिद्दी नारीका सामु पराजित भएँ म । आफूले सुनेअनुसारको बेलिबिस्तार लगाएँ ।
“रातो बलौटे भूमी,उँड्दै गरेको चरा खस्ने प्रचण्ड गर्मी,जमीनबाट रातो वालुको आगोझैं ताप,वरपर कतै झुपडी सम्म छैन न हरियो बुट्यान छ । केही पर डढेर खरानी भएको बस्तीको अवशेष । करिब सातआठ वर्षको एउटा बालक घस्रिरहेको छ बालुवामा डोबहरु छाड्दै । कतिदिनदेखी भोको छ, शरीरका करङ छर्लङ्ग देखिएको छ बाहिरै । रुने वा खान माग्ने आवाजको लागि शक्ति छैन । परिवारका सदस्यहरु सबै डढाईए आगोमा ? वा आफ्नो छोरो डढाईयो भनेर कतै भागेर गए माया मारेर । त्यो बालक केवल एकमुठी सास बोकेर कतै आफ्ना आमा बाबु वा कोही भेटिएलान् र एकथोपो पानी सम्म देलान भन्ने आशमा बिना गन्तब्य घस्रिरहेको छ । तर पानी... भनेर रुन सक्ने तागत छैन । न त आमा भनेर रुन सक्ने आवाज र आँसुनै छ । बालक जस्तै भोकप्यासले जिर्ण भएको एउटा गिद्द बालकको पछि लागिरहेको छ मर्ला र खाउँला भनेर । चाह्यो भने जिवितै त्यो बालकलाई लुछेर खान सक्छ तर हत्या गर्न चाहदैन । बरु भोकै मर्न चाहन्छ । सायद मान्छे हुन चाहदैन ऊ .........................।
‘चित्त बुझ्यो ?’ मैंले पुलुक्क उनीहरु तिर हेरेर सोधें ।
गम्भीर थिए दुबै,अबरुद्द गलाबाट घुटुक्क थुक निले एकसाथ ।
यस्तो फोटो के हेर्न खोज्या त तपाईंले ? अघि जिददी गर्थे अहिले रिसाए ।
अमिरिकन फोटो पत्रकार केबिन कार्टरले खिचेको रे । उसले आत्महत्या गरिसक्यो रे डिप्रेसनका कारण । फोटो कस्तो होला कौतुहल त भइहाल्छ नि, फोटोसँगै उसको नाम छ रे त्यही जान्न खोज्या हुँ । सफाई दिएँ मैंले ।
बिचरा त्यो बच्चा म¥यो कि,कसैले भेट्टाएर लग्यो कि,गिद्दले खायो होला हगि ? ममतामयी पीडा थियो उनीहरुमा । मैले साबधान गराएँ ‘तुरुन्तै बिर्सिनुपर्छ नत्र डिप्रेशन गराउला ।’ उनीहरु ट्वाल्ल परेर मलाई हेरिरहेका थिए ।
बुधवार, २०७० आश्विन ०२ गते २२:५० / Wednesday, Sep 18, 2013 10:50 pm